Inona no tena Instagrammable Places In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Inona no tena Instagrammable Places In Eoropa
Nandeha lamasinina dia mety ho iray amin'ireo fomba tsara indrindra mahita vaovao firenena - aina ao amin'ny entany, mijery ny toerana manodidina mihodina eo amin'ny. Ry zareo ihany koa ny fomba tsara indrindra hahatratra ny toerana Instagrammable indrindra any Eoropa!
Raha mikasika ny dia lavitra, ny telefaonina dia tena azo antoka fa na aiza na aiza ianao – tsy naka sary sy lahatsary mba milalao miaraka amin'ny be ny sivana sy ny maribolana. Fandraketana ny Travel, ny vakansy, lehibe mitantana ny tananao fomba mahatalanjona fahatsiarovana ny tanàn-dehibe, firenena, ary manohy ny dianao mankany toerana. Tsy vitan'ny no azonao mamonjy ireo fahatsiarovana sy ny jery todika ireo amin'ny ho avy, fa atao koa ny mampiasa Instagram mba hizara ireo fotoana amin'ny namanao.
fa, aiza ny toerana Instagrammable indrindra any Eoropa? Ny tsy mety maty ao amin'ny tenin'i Cady Heron avy fanahy Girls, rehefa ny isan'ny Instagrammable fahafahana, ny fetra tsy misy.
Ny toerana Instagrammable indrindra any Eoropa: Ny Venice Simplon-Orient-Express: London - Venice
Izahay mamono vorona roa amin'ny vato iray eto. Tsy vitan'ny hoe iray amin'ireo tolotra malaza indrindra fiaran-dalamby eo amin'izao tontolo izao, fa indrindra ihany koa ny toerana Instagrammable any Eoropa. Raha misy lalana hafa vitsivitsy azonao atao, ny malaza indrindra dia ny London handeha ho any Venice. Rehefa nahazo ny fiaran-dalamby ho Venice, noho ny fanampian'ny Save A Train, ny safidy dia tsy misy farany!
Ny Rialto Bridge no iray amin'ireo tetezana efatra ihany no miampita ny Venetian Grand Canal, izay midika fa tena sarotra ny sary tsy misy olona eo aminy. Safidy iray - toy ny rehetra ireo toerana - dia ny hitsidika be vao maraina.
NY GRAND Canal
Tsy mino aho fa na iza na iza miala tanàna ka tsy hahazo sary ny Grand Canal. Izany no mahatonga Venice, tsara, Venice! Ny iray amin'ireo fomba fijery tsara indrindra ny dia avy any an-tampon'i Rialto Bridge.
Ny toerana Instagrammable indrindra any Eoropa:The Bernina Express: Soisa - Italia
Mandeha eo Chur in Soisa ary Tirano in Italia, ny 122km lalana mitondra anareo amin'ny manaitra Soisa Nanketo Alpes eto. Perfect for Instagram!
Rehefa efa tonga tany Soisa, eto no tena toerana Instagrammable:
NY TOBLERONE TENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRA
Ve amin'ity tendrombohitra ity mahazatra mijery? Raha efa nihinana ny Toblerone fisotroana, izany angamba ny antony! Izany no tendrombohitra izay no asongadin'ilay fonosana ary izany no antony anisany ao amin'ny lisitry ny toerana Instagrammable be indrindra any Eropa.
Mba hahazoana izany tifitra etsy ambany, alao ny fiaran-dalamby avy any Zermatt Gornergrat ny lalana ho any an-tampon'ny, Ary avy eo dia niakatra ho any amin'ny teboka tily (lasa ny trano fandraisam-bahiny).
Soso-kevitra: ny toeram-pivarotana lehibe ao Zermatt matetika lany Toblerone barany noho izany tena nitifitra! Koa raha tianao izany nitifitra ka tsy te-hitondra ny vintana ianao dia ho azo antoka Vidio eto anatrehan'izay mahazo ny Zermatt.
Raha toa ianao eto traikefa nahafinaritra (i.e.. paragliding) dia azo antoka dia ho Mitady handrapaka ny sasany Epic Instagram tifitra. Tsy te miakatra ny tosidra? Afaka mahazo ny mangatsiatsiaka tifitra avy eny an-tampon'ny Harder Kulm. Ianao tsy mampino mahazo fomba fijery eo amin'ny tanànan'i Interlaken sy Nanketo Alpes eto Soisa.
Ny toerana Instagrammable indrindra any Eoropa: The Brocken Railway. Harz Mountain Range, Alemaina
Izao lalana manokana, ianao hiakatra avo ny 1,142m-Brocken, ny tendrony avo indrindra any amin'ny faritra avaratr'i Alemaina, nankafy Panoramika hevitra ny tontolo manodidina. fa, tsy manana ho toy ny tendrombohitra ihany rehefa niakatra hitsidika ny Harz Mountains. Raha ny tena izy, fa tsara kokoa raha tianao kilalao tanàna amin'ny Fairytale trano fiarovana, UNESCO World Heritage Sites, trano mimanda sy ny trano fitokana-monina avy amin'ny "Moyen age", na nahita bibidia any amin'ny toeram-ponenana voajanahary. Lavorary noho ny Instagram fahana!
Leipzig any Wernigerode Brocken Lamasinina
Hanover ny Wernigerode Brocken Lamasinina
Munich ny Wernigerode Brocken Lamasinina
Berlin ny Wernigerode Brocken Lamasinina
Visit Collegiate Fiangonana, Castle, ary Old Town of Quedlinburg
Miaraka amin'ny fitambaran'ny Grunderzeit sy Art Nouveau raitra, ny Old Town ny Quedlinburg mahatonga izany Ny iray amin'ireo toerana Instagrammable indrindra any Eoropa. Izany ny isa sy avo lenta ny hazo-trano voarafitra izay resy lahatra UNESCO hanambara Quedlinburg ohatra iray miavaka ny tanàna Eoropa tamin'ny Moyen Âge.
Leipzig any Quedlinburg Lamasinina
Hanover ho Quedlinburg Lamasinina
Munich ny Quedlinburg Lamasinina
Berlin ny Quedlinburg Lamasinina
Ny West Highland-dalana,: Scotland
Nandeha nanaraka ny West Highland-dalana,, ny Jacobite Steam Train dia mety indrindra ny anjara asan'ny fantatra dia milalao ao amin'ny Harry Potter sarimihetsika - toy ny Hogwarts Express. Ny fiaran-dalamby-mitantana ny 84 kilaometatra manasaraka mihinjitra Fort William avy any Mallaig amin'ny West Highland Railway-dalana,. Izany dia midika hoe matetika antsoina hoe iray amin'ireo lehibe indrindra lalamby nandehanany eto amin'izao tontolo izao, ary ara-drariny izany!
Mba jereo kely ny sasany amin'ireo pics mety ho Mitady handrapaka anao ny tenanao!
Ny toerana instagrammable indrindra any Eoropa: The Yellow Train, Frantsa
Lazao 'Eny’ izany diany! Fa zato taona mahery, izany metatra-habetsahan'ny mavo lamasinina no miolikolika ny lalana amin'ny alalan'ny frantsay Pyrénées avy Villefranche-de-Conflent ho Latour-de-Carol. Inona no tsy ampy eo amin'ny lavitra - izany 63km monja ary tokony ho ora telo ela - mahatonga azy mihoatra noho ny in tanteraka Instagrammable hevitra. Ny manaitra tendrombohitra ao amin'ny Parc de Pyrénées-paritra Naturel Catalanes satria ny iray tamin'izy ireo!
Koa mijanona ao amin'ny ambony indrindra Frantsa ny gara, Bolquere-Eyne. Izay mipetraka amin'ny 1592m ambonin'ny ranomasina, ary hiampita ny Pont Gisclard, ny lalamby fampiatoana tetezana.
Anaro ny telefaonina ary ny Instagram fampiharana vaovao farany. Fotoana au livre tapakila noho ny fanampian'ny Save ATrain ary mahazo Mitady handrapaka!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-instagrammable-spots-europe%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)